I-China Escalator isixhobo somatshini wokudibanisa umhlangano kunye nabaxhasi | Hongli
I-Escalator luhlobo lwesixhobo esiqhubekayo esiqhutywa sisixhobo somdibaniso wesakhiwo esikhethekileyo kunye nokuhanjiswa kwebhanti yesakhiwo esikhethekileyo. Inezinto ezininzi ezinokubaluleka njengezithuthi ezikhulu, ngokuqhubekeka nezithuthi. Ke imfuneko yokhuseleko iphezulu kunezinye izixhobo. Isetyenziselwa kwiindawo zikawonke-wonke ngokuhamba kwabantu okuhlanganisiweyo, ezinje ngeevenkile ezinkulu, iiklabhu, izitishi, izikhululo zeenqwelomoya kunye neenqwelomoya.
Idrayivu ephambili inamandla eyaneleyo kunye nokuqina kwaye iipokotshi ezahlukeneyo zilungelelaniswe ngokuthembekileyo kwishafti. Ngaba ukujonga okungalunganga kwiindawo ezihlangeneyo zeshafti. I-Sprocket yamkela i-iron yentsimbi ekhethekileyo, emva konyango lobushushu, ubunzima beplani engaphantsi komhlaba zihlala zifuna ukuqinisekisa impilo yokusebenza kwe-sprocket engaphezulu kweminyaka engama-20. Ubude be-chain drive enkulu kufuneka bube ngokulinganayo. Ukuba ithambo lokuqhuba elixineneyo lixinene kakhulu okanye likhulu kakhulu, intuthuzelo yesitulo somgibeli iyachaphazeleka, oko kukuthi, ixabiso lokuhamba komntu obalekayo lonyuka.
Isantya sebhanti ye handrail
Isantya esenziwa ngebhanti yesandla sihambelana nenqanaba kwaye umahluko ovumelekileyo wenyathelo yi-0- + 2%.
Kutheni lebhanti yesandla kufuneka ibambe ngokukhawuleza kune-pedal?
Okokuqala, le migangatho ingentla ifuna ukuba isantya sebhanti yesandla sentambo kufuneka sibe sikhulu okanye silingane nesantya samanyathelo kunye neziseko. Imfuneko enjalo kukuthintela ukubamba ngesandla, akuyi kuba sisantya sebhanti yesandla ngasemva kwesantya sonyathelo okanye i-pedal kwaye ibangele ukuba umzimba womntu wehle umva kwaye ube nengozi.
Ke abantu banokwenzakala ngakumbi xa athe wasilela ngasemva kunoko wasilela phambili.